Maren Blind - Kulliyadaha Hore ee Colorado
Maren Blind waxa ay ka shaqaynaysay waxbarashada ilaa 2001 oo u adeegaysay arday heer fasal kasta ah. Hogaaminta, maamulka, iyo barida, shaqadeeda ku dhawaad ​​labaatan sano waxa ay dabooshay mas'uuliyado waxbarasho oo balaadhan oo dhamaantood diirada saarayay gaaritaanka yoolalka kuwaas oo waafaqsan himilada Kulliyadaha Hore ee Colorado.
Intii ay shaqeyneysay oo dhan, Maren waxay ka soo shaqeysay bey'adaha dadweynaha, kuwa gaarka loo leeyahay iyo kuwa jaartarka ah waxayna leedahay khibrad iyo tababar ballaaran oo ay ugu adeegayso jiilka koowaad, iyo ardayda kala duwan. Maaddaama ay tahay macallin yool ku jihaysan iyo lataliye tacliimeed oo heersare ah, waxay ku faantaa waxbarashadeeda, isgaarsiinta wax ku oolka ah, iyo xallinta dhibaatooyinka si kor loogu qaado guusha ardayga shaqsiyeed.
Maren waxay haysataa BA ee daraasaadka Liberal (Education) iyo MA ee Waxbarashada: Manhajka iyo Tilmaamaha marka lagu daro Shahaadada Qalinjabinta ee Akhriska iyo Qoraalka. Falsafadeeda u gaarka ah ee waxbarashadu waxay qiraysaa fikradda dadka waaweyn ee tusaalaynaya mudnaanta barashada joogtada ah iyo tan joogtada ah, ka go'naanshaha ay jeceshahay inay ku dhaqanto oo ay kor u qaaddo iyadoo ku dadaalaysa inay waxbadan barato, shaqsiyan iyo xirfad ahaanba.
Laga soo bilaabo 2007, Maren wuxuu ku noolaa Castle Rock wuxuuna ku firfircoon yahay bulshada u adeegaya Golaha Maamulka Dugsiga Charter iyo ka qaybgalka shirarka degmada. Waqtigeeda firaaqada, Maren waxay ku raaxeysataa firfircoonaanta jir ahaaneed, laga bilaabo orodka ilaa fuulitaanka dhagaxa, u safridda adduunka oo dhan iyadoo la kulantay dhaqamo kala duwan, aqrinta buugaag waaweyn, cunto karinta iyo waqti la qaadashada wiilkeeda iyo gabadheeda.
CEC Castle Rock, La talinta CECCR